Ogaden News Agency (ONA) – HRW oo Ku Tilmaantay Duqayntii Qaxootiga Soomaaliyeed Ee Yemen Loogaystay Dambi Dagaal.
HRW oo Ku Tilmaantay Duqayntii Qaxootiga Soomaaliyeed Ee Yemen Loogaystay Dambi Dagaal.
Hay’adda Xuquuqul Insaanka ee Human Right Watch (HRW) ayaa sheegtay in weerarkii ay xulafada uu Sacuudigu hogaaminayo ku qaaday doon dad rayid ah oo Soomaali ah saarnaayeen oo marineysay xeebta Yemen ay u badan tahay in uu dambi dagaal ahaa, waxayna muujisay baahida loo qabo isla xisaabtan.
Hay’adda Xuquul insaanku waxay xustay in dhowr goobjoogayaal ahi ay sheegeen in 16-kii Maarso 2017, ay diyaarad helikobtar ah duqeysay doonta, halkaasi oo ay ku dhinteen ugu yaraan 32 qof oo ka mid ah 145 qaxooti Soomaali ah oo doonta saaraa iyo qof rayid ah oo wadanka Yaman u dhashay. 29 qof oo kale oo ay ku jiraan 6 carruur ah ayaa ku dhaawacmay, waxaana la la’ yahay 10 qof.
Sawiro maalintii xigtay doonta laga qaaday ayaa muujinaya burbur kasoo gaadhay rasaas hawada looga soo riday doonta taas oo lala beegsaday dadka shacabka ah ee bada ku dhex safrayay.
HRW waxay intaa ku dartay in dhinacyada ku lugta leh colaadda ay beeniyeen in ay mas’uul ka ahaayeen weerarkaasi, hase yeeshee xulafada uu Sacuudigu hogaaminayo oo keliya ayaa leh diyaarado dagaal, halka xooggaga Xuutiyiinta iyo kuwa Cali Cabdalla Saalax aanay lahayn awooddaasi.
HRW waxay intaa ku dareen inkastoo dowladda Federaalka Soomaaliya ay dalbatay in dalalka isbahaysanaya ay baadhitaan ku sameeyaan weerarkaasi, haddana xulafada Sucuudigu diyaar uma aha baadhitaan micno leh oo ku aaddan tacaddiyada ay ciidamadeeda gaystaan.
Duqeynta iska cad ee ay xulafadu u geysatay doonta ay qaxootiga ka buuxeen, ayaa ah falkii ugu dambeeyay ee suuragal ah in uu yahay dembi dagaal oo ay ka fulisay Yaman inta uu socday dagaalka hadda laba sana jirsaday,” ayay tiri Sarah Leah Whitson, oo ah agaasimaha Human rights Watch ee Bariga Dhexe. Waxa ay intaa raacisay “Taxadar la’aanta iyo tixgelin la’aanta noolasha dadka rayidka ah ayaa gaartay heer xun oo aan horay loo arag.”
Gabagabadii, Warbixinta ay Human Rights Watch ka soo saartay weerarkii lagu laayay Soomaalida qaxootiga ah iyo duqaynta xulufada Sucuudigay ee Yemen, ayay ku sheegtay inaysan suurtagalin in ay ogaato dalka ay diyaaradiisu weerartay doonta qaxootiga.